Shandong New Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Tool Co., Ltd. waa ganacsi oo teknoolojiyad sare qaranka ku takhasustay soo saarista qalabka mashiinka CNC. In falsafadda ah "Dad-u janjeedha, Technical Innovation", shirkadda tudho ma dadaalada lagu abuurayo "-xawaaraha sare,-sax sare,-halaynta sare" qalabka CNC leh xuquuqda hantida aqooneed lahaansho by Samo falku ee xoogga dhaqaalaha badan, tayo farsamo oo xoog leh xoog iyo falsafada ganacsi sare.
Iyada oo sano ka ah dadaallada, shirkadda ayaa si guul leh horumariyo sax yar CNC lathe bar si toos ah (guud ahaan loo yaqaan sax lathe automatic) oo u qaybsan yahay taxane AK, taxane SM, taxane SX oo taxane SC, ayaa shaqo isku darka jeedin-dhagax ah oo si gaar ah dabaqi karo waaweyn-Dufcaddii multi-duwan-sax sare hawlaha machining ah caato ah-usheeda dhexe iyo mid yar adag qaybo qoqobada. Waxyaabaha Our awood u leeyihiin ilaashan sax sare, iyadoo qaybo kulan weyn ee dhaqmaadka noocyada caalami ah oo caan ah, iyo sidoo kale geeddi-soo-saarka iyo teknoolajiyada hogaanka ee Shiinaha. The alaabta machined si ballaaran codsatay in isgaarsiinta, mashiinada caafimaad, qaboojiye, alaabtii indhaha, qalabka guriga, aerospace, baabuurta, mootooyin, korantada, matoorrada, warshadaha timepiece iyo warshadaha kale.
Tan iyo markii la aasaasay, Shandong New Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Tool Co., Ltd. ayaa ku saleysan cilmi-baaris, horumarka iyo wax soo saarka ee-dhamaadka sare lathes CNC. In falsafada ganacsiga ee "Horumarinta Constant, Customer Sare" ee, shirkadda u hibeeyeen ilaa ay noqoto saaraha qalabka iyo adeega bixiyaha adduunka keentay a.